BEERAHA BEERAHA EE "KOLOBOK": QEEXIDA NOOCYADA KALA DUWAN, BEERITAANKA HABBOON IYO KUWA GAARKA AH EE DARYEELKA - BERRY
Wixii ka mid ah ma cade in goobta dhalashada ee gooseberries. Qoraaga kala duwan ayaa ku qora Western Europe, Africa, Caucasus, America. Waxaan leenahay berry tan iyo la yaqaan oo aad u jeclaa muddo dheer. Noocyo badan oo cusub ayaa u muuqday habka xulashada, labadaba kuwa aan marar badan laga helin siyaalaheenna, iyo kuwa baahida joogtada u ah ee bannaanka u. Mid ka mid ah noocyada ugu wanaagsan ee gudaha ee miro yar - "Kolobok".
Taariikhda miro dhirta "Kolobok"
Kala duwanaanshaha ayaa la yaqaan tan iyo 1988. Dalkaagii hooyo - USSR (RSFSR). Waxaa soo saaray khabiiro ka tirsan VSTISP (Dhammaan Ruushka Isku-tagga iyo Tiknoolojiga ee Jooniska iyo Daaweynta). Kala duwanaanshaha waxaa la abuuray 1977-kii markaad ka gudubto noocyada kala duwan ee "Pink 2" oo kala duwan oo isbeddel ah "isbeddel", ayaa la imtixaanay 1988-kii, ka dib markii lagu galay diiwaanka gobolka. Tani waa miiska kala duwan, caan ku ah dhadhanka ugu fiican ee foomka cusub iyo farsameed labadaba. Waxaa loo isticmaalaa in lagu sameeyo macmacaanka, keega, jamarka, macmacaanka, casiirka, ku haboon qaboojinta.
Ma taqaanaa? "Kolobok "maanta waa mid ka mid ah noocyada ugu caansan ee caadiga ah ee ku yaala Ruushka iyo dalalka CIS.
Astaamaha iyo dabeecadaha kala duwan
Mawduuca "Kolobok" wuxuu leeyahay sharaxaaddan soo socota: kalluunka baadiyaha, xoog leh koraya, kicin, oo leh caleemo awood leh. Waxay leedahay dhexdhexaad ah (illaa 3-4 g) iyo ballaaran (ilaa 7-8 g) miro dhuunta ah ama yar yar. Berriga la tunta ayaa muddo dheer ku sii jiri kara baadiyaha oo aan dib udhicin. Midabka berry waa midab-casaan-casaan. Jidhku waa mid casiir leh, macaan, macaan, oo leh sharaf yar. diirka, cuncunka, dhoobo, aan lahayn qoryo.
Caleemuhu waa yar yihiin, ilig, caleemo hoose - midab-cagaaran-cagaaran, on top - qurux badan oo cagaaran madow. Caleemaha waa awood. Gooseberry "Gingerbread Man" oo dhererkiisu yahay 1.5 m, laakiin isla xilligaas ayaa laamaha geedku badanaa hoos u dhigaan, sameynta arc. Dhallinyaradu waa siman, lignified, oo leh jilif midab-brownish ah iyo ku dhawaad ​​oo aan qodax. Spines ayaa kaliya ku jira bogaga caleemaha.
Faa'iidooyinka iyo qasaarooyinka miro-dhooska "Kolobok"
Mid ka mid ah faa'iidooyinka waa jilicsanaanta jiilaalka ee mulkiilaha "Kolobok" (xilliga qaboobaha duurjoogta si aan toos ahayn ha u dhigin), iyo sidoo kale adkeysi, aan qabyo ahayn, dhalantu degan tahay, iska caabin udheerta iyo jeermiska xayrta. Gooseberry "Kolobok" waa noocyo hore: Bisaylkiisa berri wuxuu dhacaa bilowga bilawga Luulyo wuxuuna soconayaa ilaa dhammaadka xagaaga.
Ma taqaanaa? Kala duwan "Kolobok" waxaa loo isticmaalaa winemaking. Khamrigu waxaa lagu qiimeeyaa dhadhankiisa gaarka ah iyo udgoon.
Soo bixinta miro yar oo "Kolobok" - illaa 9-10 kg of berry ka soo baadiyaha ah. The berry ma aha oo kaliya dhadhan fiican leh, laakiin sidoo kale faa'iido leh - waxay ku jiraan xaddi badan oo fitamiin C (24-28 mg / 100 g). Iyada oo dhamaan faa'iidooyinka kala duwan ee kala duwan, waa in maskaxda lagu hayo in "Kolobok" aysan u dulqaadan karin isbedelka barafka iyo dhalada. Inta lagu jiro muddooyinkaas, wuxuu xitaa xitaa dhiman karaa - isaga oo aan ka cabsanin qabow sida dhibicda heerkulka.
Waxaa ka wanaagsan inaad ka iibsato xannaano ama mid ka mid ah caleemaha sumcad leh, halkaas oo ay jiraan xulasho ballaaran oo geedo miro ah oo caafimaad qaba. Qiimaha geedo wanaagsan ayaa dhaqso u bixin doona.
Waa muhiim! "Gingerbread Man" - miro yar oo leh suuq suuq ah, oo sidaas awgeed, dib u bixinta beeraha iyo taranka.
Waxaa fiican inaad qaadato saplings laba sano jir leh saddex ama afar caleemo xoog leh, oo leh xidid dheer oo lignified loto dheer ilaa 25-30 cm, leh caleen la'aan ah iyo burooyinkeeda aan caleemaha - caleemaha waxaa loo ogol yahay oo keliya sare ee laanta.
Gooseberries waxaa lagu beeray guga ama dayrta. Guga waxaa la beeray dabayaaqadii March - horraantii Abriil. Haddii aad ku beeri jiilaalka, ka dibna September - geedka waa in ay leeyihiin waqti si buuxda u qaadan xidid ka hor dhaxan. Halkaa ka sii wanaagsan miro yar oo "Kolobok" ayaa lagu beeray dayrta: Beerta xilliga dayrta waa la doorbidi karaa in la sii wado dhalashada, waxayna fududeyn doontaa daryeelka dambe, sida guga koontooyinka gooseberry horay u ubaxday, iyo miraha guga badanaa dhicin way dili karaan. Xilliga dayrta, dhirta dhalinyaradu waxay qaadataa xidid, duufaan iyo kobcooyin caadi ah, iyo tan iyo guga waxay sii korodhey dhererkeeda.
Iyada oo la raacayo cagaarka ayaa dooranaya meel furan oo ku taal dhinaca qorraxda ee goobta.
Waa muhiim! Ha beeran gooseberries meelaha hoose iyo dhulka oo leh meel u dhow biyaha dhulka.
Cabbirka ugu fiican ee gooseberries waa loamy bacrin ah, laakiin sidoo kale ku koraa on clayey, dhoobo ciid. Si xun u kobcisay dhul dabiici ah, dhul aad u culus. Miyuu jecel yahay carrada adag oo xoog leh, sidaas darteed haddii ciidda uu yahay acidic - waa in la gooyaa waxoogaa acidic - pH ilaa 5.5. Si arrintan loo sameeyo, waxaad isticmaashaa timirta, xumbada, burka dolomite; waxay horay loo sameeyey - ma aha sanadka markii miro yar la beeray, laakiin sannad ka hor.
Diyaari qorshe lagu beerayo laba ama seddex isbuuc - laga nadiifiyey haramaha, si qoto dheer u qoday (illaa iyo 30 cm) oo heerkulkoodu yahay, tirtiraya buro waaweyn.
Beerto geedo yar yar oo ku yaal goobta
Dhexdhexaadkii godadka hoostiisa miisaankiisu waa 45-55 cm, qoto dheeruna waa ilaa 45-50 cm Lakabka sare ee dhulka iyo Bacriminta dabiiciga ah ama macdanta ayaa si siman loogu tuuraa xagga hoose. Qoryaha ayaa lagu dajiyaa bartamaha waxaana lagu daraa dhibic dhibic ah, laakiin aan ka yareyn 6-7 cm qoorta xididka. Ka dibna khafiif u dhig ciidda, mulch (caleemaha beerta, peat, hay, caws) iyo waraabiyo. Wixii miro yar leh "Kolobok" qorshaha soo socda ee loo isticmaalo - 2 × 1.5 ama 1.7 × 1.7. Haddii aad siisid dad badan, dhererka baadiyaha hoos u dhacda, faafitaanka iyo dhalidu way yareysaa.
Daryeel iyo beeritaanka miro yar oo kala duwan "Kolobok"
Iyadoo beeritaanka habboon ee miro yaraanta "Kolobok", beerashadooda kale waa mid fudud - waraabinta, dabacsan, cawska, cayayaanka, guga iyo dayrta qashinka, iyo ku darsiga dheeraadka ah.
Biyaha sida ciidda u qalajiyo, laakiin aan u oggolaanin qalajinta oo dhan ama istaabashada biyaha. Waraabinta waa inay noqotaa lebis - badanaa laakiin dhexdhexaad ah. Fasaxyada dheeraadka ah ee aan biyo lahayn waxay keeni doonaan berry si ay u jabiyaan. Weedhidda waxaa loo sameeyaa burburinta haramaha iyo dabacsanaanta. Loosen ka dib waraabiyo iyo bacarimiso. Hooska mulch ee marka hore, ciidda ma dabooli karo.
Bacriminta for gooseberries wax ku biiriyaan marka beerto - at hoose ee ceel. Bacriminta dabiiciga ah iyo macdanta waxaa loo isticmaalaa tan. Tusaale ahaan, isticmaal dhayalada soo socda: compost, humus, peat - 0.5 - 1 baaldi halkii daloolka; ash qoryo ah - 500-600 g halkii god; superphosphate - 180-250 g per well. Waxaad bacrimin kartaa iyo ka dib markii la beero ka hor inta aan caleemaha - Bacriminta macdanta waxaa lagu qasi jiray biyo iyo waraabiyaa horay loo beeray geedo. Later waxaa la bacrimiya sanad walba - ama dayrta leh dhulka qodaya, ama ilaa qoyaan guga. Bacriminta waxay la mid yihiin marka la beero.
Kuleylka "Kolobok" markaad beerto - 5-6 burooyinkood oo keliya ayaa lagu tuntay laanta sannadkaas. Tani waxay siisaa korriin xoog leh si ay u laamoodo shimbiraha. Marka laga beerto mulkiilaha "Kolobok", waxaad u baahan tahay inaad ogaato in manjadu ay si joogto ah u noqon doonto mustaqbalka.
Waa muhiim! Kala duwanaanshuhu wuxuu u nugul yahay dhumuc, sidaas awgeed waa muhiim in la jarjiro marxaladda xad-dhaafka ah ee hab-dhiska.
Gooseberry ma jecla xayawaanka iyo branching xoog leh wuxuu u koraa si liidata wuxuuna noqonayaa sariir. Warshadu waa mid aad u badan fruiting, oo leh horumarinta 23-25 ​​aan qaangaadhin da'da. Laamaha waaweyn oo lumay midho-dhalidooda ayaa laga saaraa, iyagoo ka tagaya kuwa da 'yar.
Fikrad ahaan, sida baadiyaha u koraa, 4-5 laamood oo qalafsan oo adag waa in la tagaa marka la gooyo. Iyo si joogto ah u soo kabashada baadiyaha - jarida caleemaha engegay oo ka tagay gooyn xoog leh lateral. Guud ahaan, ka saar dhammaan laamihii waxyeeloobay, iskuday, oo leh calaamado kallana.
Markii ugu danbeysay ee xilligaa waxay gooyeen baadiyaha xilliga qaboobaha - bilawga dhexe-bartamaha bisha - waxay u gooyeen sida caadiga ah, laakiin isla markaa waxay ka saaraan dhammaan laamaha oo ka weyn shan sano. Ku dhaji maraqa daruuriga ah ee lagama maarmaanka u ah beerta beerta.
Dhirta hoyga ee xilliga jiilaalka
Ka dib markii manjooyin xilliga dayrta, laamaha ayaa la isu soo ururiyaa, la riixay oo la xidhxidhay (aan ahayn) baadiyaha hal ama laba meelood.
Waa muhiim! Waxaa lagugula talinayaa in aad geeddi-socodka geedisid ka hor inta aanad dhicin fangaska beerta. Daawada ugu fudud ee waxtar leh waxay ku buufinaysaa 1% dareere Bordeaux.
Ka dibna dharka samee, qodo ciidda (10-12 cm ee aagga asalka ah, ka dibna - illaa 20 cm), waraabiyo, mulched (peat, humus). Xidhanka koowaad ee sanadlaha ah, iyo xitaa geedo badan oo baaluq ah, ayaa la daboolay laamood, xajmiga, iyo walxo kale oo daboolan oo daboolan. Haddii uu jiro baraf badan, ka dibna way u fiicantahay inay si buuxda u daadiyaan baadiyaha.
Shuruudaha Bisaylkiisa iyo goosashada
Isteroberiga u bislaadaan by bartamaha xagaaga - in July. Tan iyo noocyada kala duwan ee aan la taaban karin, goosashada waa mid fudud oo ammaan ah. Cawska la soo ururiyey waxaa lagu kaydiyaa waqti dheer, waxaa lagu gartaa gaadiidka sare.
Ma taqaanaa? Baahiyaha kala duwan, berry ka soo baadiyaha ayaa la qaataa waqtiyo kala duwan. Cuntada, barafka - marka si buuxda u bislaaday, jilicsan, oo leh midab hodan ah. Wixii soo saaris ah ee macaanka, jamsi, marshmallows, ilaaliyaa - wax yar ka yar oo aad u fahmeen, xoogaa adag (marxalad farsamo farsamo).
Haddii aad sameysey mashiinkaas, waxaad samaysay wax kasta oo sax ah - waxaad dooratay geedo wanaagsan, waxaad abuurtay daryeelka dhirta aad u baahan tahay, oo la bixiyay bacarin iyo manjooyin, ka dibna waxaad ku heli kartaa 10 kg oo beruud ah iyo in ka badan hal kiilo saddex-jir ah.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Berry 2019